Vonoan’olona mampiahiahy tetsy Ampasanimahalo : telo andro taty aoriana vao hita tao an-tranony ny fatiny | NewsMada
Vonoan’olona mampiahiahy tetsy Ampasanimahalo : telo andro taty aoriana vao hita tao an-tranony ny fatiny
Miankohoka eo am-pandriana, toa mandohalika amin’ny tany. Izany no nahitana ny fatin’ity ramatoa iray, tao an-tranony, tetsy Ampasanimahalo, omaly maraina, raha efa tamin’ny alatsinainy teo no voalaza fa namonoana azy. Vonoan’olona mampiahiahy.
Ramatoa iray manodidina ny 35 taona eo no hita faty, nihohoka teo am-pandriana tao an-tranony, teny amin’ny fokontany Ampasanimalo, avaratr’Antanimora, omaly maraina. Araka ny fanazavan’ny fianakaviany, tsy fantatra ny antony nahafaty ity ramatoa ity. “Tsy manam-bady izy fa ny zanako lahy no miaraka aminy. Tsy nisy ratra ary mety efa tamin’ny alatsinainy alina ny nahafaty azy fa izao vao hitanay. Tsy tao ihany koa ny zanako”, hoy ny fanazavan’ny renim-pianakaviana iray akaiky ity vehivavy ity.
Ny olona teo an-tanàna kosa anefa, tetsy andaniny, nilaza fa miady foana ity ramatoa ity sy ny vadiny. “Mpanasa lamba miaraka aminay io. Matetika miady izy mivady ary vao ny alatsinainy alina teo no novonoim-badiny izy no nitaraina taminay. Nisy fery tamin’ny vatany, vao maika nopotserin-drangahy io”, hoy ireo olona teny an-tanàna.
Mifamahofaho teo ny antony nahafaty an’ilay ramatoa. Ny fokonolona no niantso ny polisy nizaha ny razana. Tonga teny an-toerana ireo niaraka tamin’ny BMH, nanao ny fizahana ny razana ary nitondra izany teny amin’ny tranom-paty.
Araka ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana, nahitana ratra tamin’ilay ramatoa hita faty io. Manokatra ny fanadihadiana izy ireo hahafantarana ny antony nahafaty azy sy izay mety tompon’antoka tamin’izany. Efa nisy ny famotorana savaranon’ando tamin’ny olona maromaro, omaly, nataon’ny polisy.
Araka ny fanadihadiana natao, anisan’ny mampiditra am-ponja ary misazy herintaona hatramin’ny dimy taona ny lehilahy na vehivavy manao herisetra amin’ny vadiny na olona miaraka aminy, na ny zanany. “Azon’ny olona atao tsara ny mametraka fitoriana eny anivon’ny polisy misahana izany. Misy endriny maro ny herisetra ka ao ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-moraly izay mety manimba mivantana ny olona iray”, hoy ny fanazavana.
65 isan-jaton’ny vehivavy eto Antananarivo no iharan’ny herisetra, araka ny antontan’isa navoakan’ireo mpanao fanadihadiana misehatra eo amin’ny fiarovana ny zon’ny vehivavy. Nampiakatra ny tahan’ny fanaovana herisetra an-tokantrano na amin’ny vehivavy ihany koa ny fisian’ny krizy eto amin’ny firenena. “Noho ny tsy fisiam-bola, tsy fahampiana, sns, tonga amin’ny fifamonoana ny fiainan’ireo mpivady indrindra amin’ireo olona sahirana”, hoy ny fanamafisana.
Maneho io endrika herisetra io, ity nitranga teny Ampasanimalo ity. Ny olona teo amin’ny manodidina kosa nanamafy ny fisian’ny ady teo amin’ireo mpivady, ary manahy fa ilay rangahy no nahavanon-doza. Ny mpitandro filaminana ihany anefa no afaka manamarina izany.